Baiboly pejy 34 - Ny Baiboly
Voalohany < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Manaraka Farany
Eksaody toko 5 (tohiny)
19Hitan'ny mpanoratry ny zanak'Israely fa efa mandry andriran'antsy izy, fa ilazana hoe: Ny birikinareo tsy handatsahana, fa isan'andro dia ho latasy toraky ny fanao isan'andro ihany. 20Ary izy nahita an'i Moizy sy Aarona, izay efa tao rahateo, miandry azy ireo hivoaka avy ao amin'i Faraona, 21ka nilaza taminy hoe: Aoka Iaveh no hahita anareo sy hitsara; fa ny fitia azonay tamin'i Faraona sy ny mpanompony nataonareo mody halavolo, ary notoloranareo sabatra eo an-tànany izy hamonoana anay. 22Niverina nankany amin'ny Tompo Moizy tamin'izay, ka nanao hoe: Tompo ô! nahoana hianao no dia nampidi-doza tamin'ity vahoaka? Nahoana aho no dia nirahinao? Fa hatrizay nankanesako tany amin'i Faraona hiteny amin'ny anaranao izay, ny vahoaka tsy itondrany roa intsony, nefa hianao tsy nanafaka ny vahoakanao velively akory.
28Raha niteny tamin'i Moizy Iaveh any amin'ny tany Ejipta, 29dia izao no nolazain'ny Tompo tamin'i Moizy: Izaho no Iaveh: Lazao amin'i Faraona, mpanjakan'i Ejipta, izay rehetra lazaiko aminao. 30Ary izao no navalin'i Moizy teo anatrehan'ny Tompo: Indro fa votsa fiteny aho, ka ahoana ange no hihainoan'i Faraona ahy?
Eksaody toko 7
Ny tehina manjary bibilava - Ny loza voalohany - Ny rano manjary rà.
1Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: Indro hianao efa nataoko ho Andriamanitra eo imason'i Faraona, ary Aarona rahalahinao no ho mpaminaninao. 2Hianao moa hilaza izay rehetra handidiako anao; Aarona rahalahinao kosa, hiteny amin'i Faraona mba handefany ny zanak'Israely hiala amin'ny taniny. 3Ary izaho hanamafy ny fon'i Faraona, sy hampitombo ny famantarako amam-pahagagako amin'ny tany Ejipta. 4Tsy hihaino anareo Faraona, ary haninjitra ny tànako amin'i Ejipta aho, ary fitsarana lehibe no hamoahako avy amin'ny tany Ejipta, ny tafiko, ny oloko, ny zanak'Israely. 5Ho fantatry ny Ejipsiana fa izaho no Iaveh, rahefa haninjitra ny tànako amin'i Ejipta aho sy hamoaka ny zanak'Israely avy ao afovoan'izy ireo. 6Dia nataon'i Moizy sy Aarona izay nandidian'ny Tompo azy; izany no nataony. 7Efa valo-polo taona Moizy ary telo amby valo-polo taona Aarona, tamin'izy ireo niteny tamin'i Faraona.
8Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy sy Aarona: 9Raha avy izay hilazan'i Faraona aminareo hoe: Manaova fahagagana, dia lazao amin'i Aarona hoe: Raiso ny tehinao ka atsipazo eo anatrehan'i Faraona, fa hanjary bibilava iny. 10Dia nankany amin'i Faraona Moizy sy Aarona, nataony avokoa izay nandidian'ny Tompo azy ireo. Natsipin'i Aarona ny tehiny teo anoloan'i Faraona sy ny mpanompony, ka nanjary bibilava. 11Fa mba nantsoin'i Faraona koa ny mpanao ody any Ejipta, dia mba nahavita torak'izany koa, tamin'ny fankatoavany. 12Samy nanipy ny tehiny avy izy, dia samy mba nanjary bibilava koa. Faingy natelin'ny tehin'i Aarona avokoa ny tehin'izy ireo. 13Ka nihamafy ny fon'i Faraona, fa tsy nihaino an'i Moizy sy Aarona izy, araka ny efa voalazan'ny Tompo rahateo.
14Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Efa nihamafy ny fon'i Faraona ka mandà tsy handefa ny vahoaka. 15Rahampitso maraina mankanesa any amin'i Faraona hianao, fa hivoaka ho any amoron-drano izy, ka dia ho eo amoron'ny ony hianao miandry azy. Hoentinao eo an-tànana ilay tehina voaova ho bibilava, 16ary hianao hilaza aminy hoe: Nirahin'ny Tompo, Andriamanitry ny Hebrio, ho aty aminao, aho, hilaza aminao hoe: Avelao handeha ny vahoakako, hanompo ahy any an'efitra. Ary indro fa mandrak'izao dia tsy nety nihaino hianao.
Pejy: Voalohany < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3400 seconds